» आफू चढ्न किनेको गाडी प्रहरीलाई दिँदै मेयरले भने- मलाई भन्दा प्रहरीलाई गाडीको आवश्यकता छ..आखिर यी मेयर को हुन त ? हेर्नुहोस आफू चढ्न किनेको गाडी प्रहरीलाई दिँदै मेयरले भने- मलाई भन्दा प्रहरीलाई गाडीको आवश्यकता छ..आखिर यी मेयर को हुन त ? हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
2021, January 30th, Saturday
नगर’प्रमुख पोखरे’लले घरबाट कार्याल’यसम्म जानका लागि साइकल र मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने बताएका छन्। सर्व’साधारणको काम लागि कार्या’लय बाहिर जानु’परे आफ्नो निजी गाडी प्रयोग गर्ने बताए। उनले भने, ‘नगरपालि’कामा अर्को पनि गाडी छ, विशेष काम परे त्यो गाडी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। इनेपाल डट कम बाट